Archive du 22-nov-2021
Marc Ravalomanana “Tsy hilefitra amin’ireo intsony aho”
Tena latsaka anaty fahantrana ny vahoaka Malagasy: fahantrana ara-tsaina, fahantrana ara-pananana sy ara-bola, ny ankizy tsy afa-mianatra,…
Ho an’ny mendrika ny fankatoavana
“ Le respect se mérite.”, hoy ry zareo vahiny izay na hoe ho an’ny mendrika ny fankatoavana, raha adika malalaka amin’ny tenin-drazantsika.
Iavoloha Nasehon-dRajoelina ny Demokr’Ankizy ilay fiarany
Ireo ankizy notsongaina afaka niresaka sy nametraka fanontaniana tamin’ny Filoha no nasehon’i Andry Rajoelina ny mombamomba ny asany andavanandro,
Efa tena zava-doza Mirehitra i Madagasikara iray manontolo
Tsy misy faritra iray tsy ahitana doro ala sy doro tanety eto Madagasikara amin’izao fotoana izao, raha sary avy amin’ny satelita na zana-bolana nivoaka ny sabotsy 20 novambra lasa teo.
Midangana indray ny trangana covid-19 400 no voa, 3 no maty tao anatin’ny 10 andro
Mbola eo ny valanaretina coronavirus, ary mbola tsy afa-bela tanteraka isika. Niverina ny famoahana antontan’isa ofisialy,
Kominina Maroalopoty Faritra Androy Avotra ireo zaza varira 2 saika hamidy
Vevihavy iray nitady mpanam-bola hividy « zaza varira » na « zaza bobo » no ahahalalantsika azy aty afovoan-tany ary « enfant albinos » amin’ny teny vahiny,
Fahasalamana sy rohivoahary Maika ny fampahatongavan-tsaina ny mponina
Nifarana ny sabotsy 20 novambra teo ny Fikaonan-doha iraisam-pirenena momba ny rohivoahary sy ny fahasalamana izay notanterahina nanomboka ny 19 novambra 2021 tao amin'ny hôtely lehibe Baobab Tree tao Mahajanga.
Vondrona fifankatiavana parlemantera Hitsinjo ireo ankizy afaka baka zanaky ny sahirana
Hitsinjo ireo ankizy afaka baka zanaky ny sahirana eto amintsika ireo tera-tany Sinoa. Nanolotra vatsim-pianarana mitentina 50 tapitrisa Ar
Tolo-dalàna sy fifanarahana niteraka resabe Nifono fivarotana sy famadihan-tanindrazana…
Fomba fanaon’ny mpitondra sy ny manampahefana ankehitriny ny manisika lalàna na fifanarahana hafahafa tiana hampiharina eto amin’ny tany sy ny Fanjakana.
Nosy Be Bell Ville Naneho ny alahelony ireo mpisehatra ara-pizahantany
Nanao fihetsiketsehana nentiny nanehoana ny alahelony sy fahadisoam-panantenany ireo mpisehatra ara-pizahantany maro ao Nosy Be Hell Ville ny faran’ny herinandro teo.
VTobim-piantsonana Vatofotsy Antsirabe Tratra ilay mpisoloky mahay mampiresaka
Tsy misy toerana izay tsy tongan’ny mpisoloky intsony izany. Lehilahy iray no saika nisaritahan'ny olona raha tsy tonga haingana ny polisy teny amin’ny tobim-piantsonana Vatofotsy Antsirabe.
Kaominina Tanjombato « Ahemory amin’ny 08 ora alina ny fandehanan’ny kamiao »
Afaka herintaona raha tsy misy ny fepetra raisin’ny mpitondra fanjakana dia hihitsoka tanteraka ny fitohanana eto an-drenivohitra. Ankoatra ny rano sy ny fako izay hanototra ny tatatra ka hanimba ny lalana
Zotra rezionaly sy nasionaly Tsy mbola hiakatra aloha ny saran-dalana
Tsy mbola mihatra manomboka anio alatsinainy 22 novambra ilay fampiakarana saran-dalana kasain’ny mpitatitra ao amin’ny zotra nasionaly sy ny rezionaly hatao.
Oniversiten'Antananarivo Hiroso amin'ny fanaovam-baksiny andiany fahatelo
Hotontosaina manomboka anio Alatsinainy 22 Novambra ny andiany fahatelo amin'ny hetsika fanaovam-baksiny etsy amin'ny Oniversiten'Antananarivo ho enti-miady amin’ny valan’aretina Covid 19.
Tsena «Petite vitesse» Nihaino ny tarainan’ny olona i Dada
Nidina ifotony nihaona sy nifampiresaka tamin’ny vahoaka sady niantsena tetsy amin’ny “Petite Vitesse” ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana.
Zaranaina Christian “Azo fongorina ny Coronavirus”
Ny mandalina rehetra ny atao hoe valanaretina na “virus” dia samy mahalala fa miova vaika mandrakariva izany, hoy ny talen’ny fikarohana ao amin’ny sampan-draharaha vahiny iray no sady mpikaroka, Zaranaina Christian.
Moto sy fiara tsy manara-dalàna Miisa 198 ireo nosavaina, olona 15 no nosamborina
Nanohy ny asa fiarovany sy fanampiana ny vahoaka ny Polisim-pirenena ny 19 hifoha 20 Novambra lasa teo.
Fiatrehana ny 2023 Manomboka ny tombatombana isan-karazany
Raha i Botozaza Pierrot no natolotry ny filoha Ravalomanana tamin'ny taona 2013 dia tsy lany izany Rajaonarimampianina izany, hoy ny fanehoan-kevitra iray tao anaty tambazotran-tserasera tao.
Ankazotoho Anosimahavelona Mandry tsy lavo loha ny mponina
Mandry tsy lavo loha ny mponina ao anatin’ny Fokontany Ankazotoho Anosimahavelona. Tao anatin ny herinandro maro izay dia nisehoana hala-botry sy fanafihana hatrany teny an-toerana.
Ambanja Rongony 150 kg indray no sarona
Ho fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra any amin'iny faritra DIANA iny dia nanatanteraka fidinana ifotony niaraka ny Polisy sy ny zandary any an-toerana ny 20 Novambra lasa teo.